Kalee - Wikipedia
Barnoota qorannoo qaama (anatomy) keessatti, urinary system kan jedhamu kaleen xurii dhiigaa keessa jiru (kan akka yuuriyaa) baase, bishaan wajjin, akka fincaanitti baasa. Saayinsiin waayee kalee fi dhukkubota kalee qo'attu nephrology (nephro - kan Afaan Giriik nephros jedhamu irra dhufee kalee jechuu yoo ta'u renal jechuun immo Laatinii irra kan dhufee yoo ta'u renes jechuun kalee jechu dha.
Ilmee namaa keessatti, kaleen kutaa posterior jedhamu kan abdoomenii(abdomen) keessatti argamu keessatti argama. Gama spine lachuun kaleen tokko tokkotu jira; kaleen mirgaa tiruu jalatti yoo argamuu, kan bitaa immoo diaphragm jalatti rajiijiitti aane argama. Kalee lachuu gubbaatti xannacha adireenaaliinii (adrenal gland) (akkasumas kan suprarenal gland jedhamu)tti argama. Bakka sanitti tiruun wanna argamuufi, teessoon kaleen mirgaa xiqqoo kara gadii jira, kaleen bitaa immo xiqqo jiddutti dhiyaata.
Kaleen retroperitoneal jedhamee waammama, kuniis peritoneum (lining of abdominal cavity) dudduba argamani jechu dha. Tilmaamaan bakki itti argamani levelii vertebra T12 to L3 dha. Gubbaan kaleen cinaacha(ribs) 11ffaa fi 12ffaa marfamme argama, akkasumas kaleen lachuu kutta faatii lamaan (the perirenal and pararenal fat)iin marfamee argama; kunii immo akka boraatii ta'ee kalee qarqaara. Kaleen tokko yookan lamaanuu dhabanii jirachuun ni dand'ama. Tokko yoo ta'e unilateral renal agenesis, lama yoo ta'e bilateral renal agenesis jedhama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalee&oldid=25803" irraa kan fudhatame
Last edited on 26 Haggaya 2014, at 08:29
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 26 Haggaya 2014, sa'aa 08:29 irratti.